ሰቆቃወ 5 NASV – Kwadwom 5 ASCB | Biblica
ሰቆቃወ 5 NASV – Kwadwom 5 ASCB
1Ao Awurade, kae deɛ aba yɛn so;
hwɛ, na hunu yɛn animguaseɛ.
2Wɔadane yɛn agyapadeɛ ama ahɔhoɔ,
wɔde yɛn afie ama ananafoɔ.
3Yɛayɛ nwisiaa na yɛnni agyanom,
yɛn maamenom ayɛ sɛ akunafoɔ.
4Ɛsɛ sɛ yɛtɔ nsuo a yɛnom;
yɛbɛnya nnyina a, gye sɛ yɛtɔ.
5Wɔn a wɔtaa yɛn no abɛn yɛn pɛɛ;
Yɛabrɛ na yɛnnya ahomegyeɛ.
6Yɛde yɛn ho maa Misraim ne Asiria
sɛdeɛ yɛbɛnya aduane a ɛbɛso yɛn.
7Yɛn agyanom yɛɛ bɔne, na wɔnni hɔ bio,
na yɛn na wɔn asotwe abɛda yɛn so.
8Nkoa di yɛn so,
na obiara nni hɔ a ɔbɛgye yɛn afiri wɔn nsam.
9Yɛde yɛn nkwa bɔ afɔdeɛ de pɛ yɛn anoduane,
akofena a ɛwɔ ɛserɛ so no enti.
10Yɛn honam adɔ sɛ fononoo.
Ɛkɔm ama huraeɛ abɔ yɛn.
11Wɔato mmaa monnaa wɔ Sion,
ne mmaabunu a wɔwɔ Yuda nkuro so.
12Wɔkyekyere mmapɔmma nsa na wɔasɛn wɔn;
wɔmmfa anidie mma mpanimfoɔ.
13Mmeranteɛ yɛ adwuma den wɔ ayuoyammoɔ so;
na mmerantewaa nan toto wɔ nnyina duruduru ase.
14Mpanimfoɔ ntena kuropɔn apono ano bio;
mmeranteɛ agyae wɔn nnwontoɔ.
15Ahosɛpɛ afiri yɛn akoma mu;
yɛn asa adane agyaadwotwa.
16Ahenkyɛ afiri yɛn tiri so.
Yɛn ara, yɛnnue sɛ yɛayɛ bɔne!
17Yei enti yɛn akoma atɔ piti,
yeinom enti yɛn ani so ayɛ kusuu
18wɔ Sion bepɔ a ada mpan
na sakraman nenam soɔ no enti.
19Wo, Ao Awurade, di ɔhene afebɔɔ;
wʼahennwa firi awoɔ ntoatoasoɔ kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ.
20Adɛn enti na wo werɛ firi yɛn daa yi?
Adɛn enti na wagya yɛn mmerɛ tenten mu yi?
21Ka yɛn bata wo ho bio, Ao, Awurade, na yɛatumi aba wo nkyɛn;
yɛ yɛn nna foforɔ sɛ tete no
22agye sɛ wapo yɛn koraa
anaa sɛ wo bo afu yɛn mmorosoɔ.
ASCB : Kwadwom 5